Home Wararka Ciidamo ilaalo u ah Taliye Xigeenkii hore ee NISA oo xabsiga la...
Ciidamo ilaalo u ah Taliye Xigeenkii hore ee NISA oo xabsiga la dhigay lagana qaatay…
Waxaa goor dhow xabsiga loo taxaabay 11 ka mid ah ilaaladii TX hore ee hay’adda Nabad sugidda NISA Cabdulqaadir Maxamed Nur (Jaamac) waxaana laga qaatay afar (4) bistoolad afar (4) qori oo ah nooca loo yaqaan dabajeex iyo tododdaba (7) qori oo ah AK-47.
Ciidanka ilaalada ayaa waxaa ciidan ku soo dalbaday madaxa habmaamuuska NISA Cabdullaahi Kullane (Jiis Mariixaan) sida ay MOL u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka NISA.
Xilligii la qabanaayay ciidanka iyo hubkooda lama uusan socan TX hore Jaamac sida aan xogta ku helnay.
Arrintan ayaa keeni karta in uu fal celin ka sameeyo Taliye Xigeenkii hore Jaamac oo magaalada Muqdisho ay u joogaan ciidamo badan oo ay isku hayb yihiin.
Wixii soo kordho dib ayaan idinkala socodsiin doonaa
Previous articleBarakacayaashii loo soo bixiyay banaanbaxa oo kooxda Farmaajo lacagtii kala goosatay (Daawo Video)
Next articleMW. Farmajo shalay waxaad tiri cod halagu kala baxo! Taladaada qaado (Video)
Gud. Doorashooyinka oo soo bandhigay sharciga Doorashooyinka 2020